ရှေးအမွေ အတွက် အတိတ်က ပုံလေးတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရှေးအမွေ အတွက် အတိတ်က ပုံလေးတွေ
ရှေးအမွေ အတွက် အတိတ်က ပုံလေးတွေ
Posted by Diamond Key on Feb 27, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
စိန်သော့ ငယ်တုန်းက ရိုက်ချက်တွေ
ဒီနေ့ ကိုပေါက်ရဲ့ “မန္တလေးက……………………ရှေးအမွေ (တစ်)” http://myanmargazette.net/103958/travel/local-guides လေးဖတ်ရတော့ မနေ့က Scan ဖတ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပုံဟောင်းလေးတွေကို သတိရမိလိုက်တယ်။ ပစ္စည်းလေးတွေ ရှင်းရင်းနဲ့ ကိုယ်ငယ်ငယ်က ဖလင် ကင်မရာ စကိုင်နေတုန်း ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံဟောင်းလေးတွေ တွေ့ရတော့ မူရင်း ဖလင်လည်း မရှိနိုင်တော့တာနဲ့ ပုံဟောင်းနွမ်းလေးတွေကိုပဲ အမှတ်တရ အဖြစ်နဲ့ Scan ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပုံလေး တစ်ပုံက ကိုပေါက် ဒီလိုရေးခဲ့တဲ့ စာသားလေး အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုပေါက်က … “
ကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကတော့ ကျုံး က မြေသားဘောင်။ ကျုံးထဲမှာကြာပန်းရှိတယ်။ ရေမှော်ရှိတယ်။ ငါးပူတင်းဗိုက်ဖောင်းဖောင်းလေးတွေရှိတယ်။ ငါးဖောင်ရိုးလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်။” လို့ ရေးခဲ့တယ်လေ။
နောက်တစ်ပုံ အတွက် ကိုပေါက်ရေးခဲ့တာလေး ဆက်ဖေါ်ပြပါရစေ။ “ မြေဘောင်ကနေ ကျောက်စီဘောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ငယ်က ကျုံးဖြတ်တဲ့ တံတားတွေ ပျောက်သွားတယ်။ ( ကိုပေါက် ငယ်က ဖြတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာက “ ကျုံးထဲက မန်းသီတာ တံတားလေးများ ဆိုလေသလား။ အဲဒီ တံတားလေးက ကိုပေါက်တို့ ခေတ်တုန်းက အတွဲလေးတွေ ကျုံးထဲက မန်းသီတာ ဥယာဉ် ကို သွားတဲ့ တံတားလေးလေ။ ပုံထဲမှာ ပါသေးတယ်) ။ ခုတော့ မရှိတော့ပြီလေ။
နောက်တစ်ပုံလေးကတော့ ကိုပေါက်ရဲ့ “မှောက်ချီ လှန်ချီ” လေး သတိရမိလို့ပါ။ အဲဒီ လက်ရှိ ကန်တော်ကြီးထဲက ပြည်ကြီးမွန်ဖေါင်တော်က နဂိုက မန္တလေး အရှေ့တောင် ကျူံးထဲကပါလေ။ ဒီဖက်ခေတ်ရောက်မှ ကျူံးထဲကနေ ကန်တော်ကြီးထဲ ရောက်သွားရတာပါ။ ပြည်ကြီးမွန်ဖေါင်တော် အနောက်မှာ မြင်နေရတာက ဆီဒိုးနားကြီး ဆောက်နေဆဲကာလက ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ပေါ့။
ကိုပေါက်ရဲ့ “မန္တလေးက……………………ရှေးအမွေ (တစ်)” ကို ကိုပေါက်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ပုံလေးတွေ ဖြည့်လိုက်တာပါ။
ရှေးတုန်းကပုံလေးတွေ ၊ကိုစိန်ကီးရဲ့ လက်ရာ ဟောင်းလေးတွေလဲ အားပေးချင်ပါရဲ့
ဖလင်ခေတ်ထဲက လက်ရာကြည့်ပြီး ကိုစိန်ကီးရဲ့ လက်ချက်တွေ ဘယ်လောင်းပြင်းသလဲ ခန့် မှန်းမိသွာခြင်း ရယ်ပါလေ
နော့ကို စိတ်ညစ်အောင် လုပ်နေကြပြန်ပါပြီ …. :mad:
နော့ ပုံဟောင်းလေးတွေ၊ ဖလင်ဟောင်းတွေက အဝေးရောက်နေခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်မှာ အိမ်က သိမ်းထားပေးလိုက်တာ၊ အသိမ်းထိန်းလွန်ပြီး ပျက်စီးကုန်ပါလေရောဗျာ … ခုများတော့ ….. စိတ်များညစ်ပါတယ် .. မေ့လည်း မမေ့နိုင်ပါ :mad:
မြေဘောင်ကျူံးလေးက မျက်စိထဲ ပိုအေးသဗျ..
ဒါနဲ့ ကျူံးကြီးကို ပြန်တူးဖော်တုန်းက ပစ္စည်းတွေ အတော်ရလို့ ကြားမိသလိုလိုပဲ … ဟုတ်လားဗျို့
ပြည်ကြီးမွန်ဖောင်တော်က ဘယ်အချိန်လောက်ကများရှိခဲ့တာလဲ မသိ….
င်္Film မှာ Positive (Slide) နှင့် Negative ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Positive ဆိုရင်တော့ Digital ပုံကူးဆိုင်များမှာ Positive file scan နဲ့ ဖတ်ပြီး Digital file အဖြစ်နဲ့ သိမ်းလို့ရပါတယ်။ Negative file ဆို၇င်တော့ ပုံကူး Scan ဖတ်ပြီး သိမ်းမှ ရပါမယ်။ တိုက်ရိုက် Negative film to Digital file တော့ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မတွေ့ဖူးသေးပါ။ သိသူများ ပြောပေးပါအုံး
ကျနော်ကျုံးကို ဓါတ်ပုံ ကြုံတိုင်းရိုက် ရာသီမရွေးရိုက်။
အခုတင်မလို့ရွေးထားတာ တင်ပြီးသား လေးပုဒ်စာရှိနေပြီ။
ကျုံးတူးတုံးက ဘာမှ မရလိုက်ဘူး။
ပုံလေးက တပုံထဲပဲ ရှိတော့တာလား ။ ရှိသေးရင်တင်ပေးပါအုန်း ။ ပျက်သွားတာတွေ နှမြောစရာပဲ ။
အရင်တုန်း က ကိုပေါက် ပုံတွေ ကို ဈေးသတ်မှတ်ပေးဖူးတယ်
အခု ကိုစိန်သော့ အလှည့် ။
ဒီပုံတွေ အတွက် သဂျီးက ဈေးမေးလာခဲ့ရင် တစ်ပုံ ကန်ဒေါ်၅၀၀၀ ထက် မနဲစေပါလိုကြောင်း
ပေးထားတယ် သူကြိးက ဆယ်ဒေါ်လာပေးမယ်တဲ့။
ဟယ် ကိုပေါက်ရေ တကယ်ကိုပေးရင်တော့ ကိုပေါက်ပင်ပန်းရကျိုးနပ်ပါပီ။
ကောင်းတယ်ဗျာ။ကိုပေါက်တို့ ကိုစိန်သော့တို့ လို စီနီယာတွေ လက်ရာတွေ
ကျုပ်ကတော့ အနုမြူအပျော့ ကပဲ ဦးနှောက်ဆေးခံထိထားလို့လားမသိ…
၁၀ဒေါ်လာမယူဘူး သဂျီး ၁၀စင့် ပဲ ယူမယ်….
၁ကတ် ပရင့်ထုတ်တိုင်း ..၁၀စင့် ပဲပေးပါ….
တခြား ထပ်ရောင်းခွင့် ကျုပ်ပဲ ကိုင်မှာနော်….. ယူမား …
Info ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ Prince of Pennsylvania (PoP) ၊
တရားဝင် သုံးခွင့်တောင်းထားတာ၊ သုံးခွင့်ပေးထားတာတော့ မရှိပါဘူး။
အောက်က Diamond Key လေးမဖျက်ထားလို့ Credit ပေးတယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်။
လေးစိန်ကြီး ပုံတွေ မတင်တာကြာပြနော်။ ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ပျောက်နေပါလား။ ဓာတ်ပုံတွေ ထပ်တင်ပေးပါဦး။